Ukuhumusha okusheshayo nokunembile kusukela futhi kuye ezilimini ezingu-71 • CE översättningsbyrå
Kuyisinqumo esibalulekile ukukhetha inkampani yokuhumusha enokwethenjelwa kanye nenobuchwepheshe. Thina lapha e-CE siyakuqonda ukubaluleka kokwendlulisela umyalezo wakho ngokucacile nangokunembile. Ngosizo lwethimba labahumushi bethu abanolwazi, sisiza izinkampani, izinhlangano, amabhizinisi kanye nabantu ngabanye ngokubahumushela kuye futhi kusukela ezilimini ezingu-71. 10% wesaphulelo kumakhasimende amasha!
Inkampani ezoba yi-CE yasungulwa ngo-1999 ngomgomo wokuthi inikeze izinkonzo zokuhumusha ezisheshayo, ezethembekile kanye nezifinyeleleka kalula. Isiqubulo senkampani yethu yokuhumusha ukwenza ukuhumusha kwezinga eliphezulu ngesikhashana esincane. Siyazi ukuthi isikhathi sibaluleke kangakanani ebhizinisini; ukwephuza ngemizuzu embalwa-nje kungaba nemiphumela engemihle. Ngakho i-CE izibophezele ekwenzeni ukuhumusha ngesikhathi nangamanani akahle.
Ukuba ne-CE njengomlingani wakho wokuhumusha, akudingeki ukhathazeke ngezikhathi zokuthunyelelwa umsebenzi, izinga, noma inkokhelo. Senza ukuhumusha kwezinga eliphambili emikhakheni eminingi, ngaphandle kokucindezela amakhasimende ethu ngomsebenzi, ukubhala, ukuwachithela isikhathi, noma ngamanani emba eqolo.
SIZOKWENZA OCELE UKUBA SIKWENZE BESE SITHUMELA UMSEBENZI NGOKUSHESHA